Raha toa moa ka ... hitako ny blaogin'i za : comments » What if ...
Wednesday, October 20, 2010 - 12:53:32
misaotra nitsidika e! ty ny fil RSS fa somary niafina :)
Wednesday, October 20, 2010 - 13:17:38
Misaotra indrindra. Tena niafina fa tsy somary niafina ;) Hay ilay izy tsy miseho raha tsy ary amin’ny HomePage, tssss.
Wednesday, October 20, 2010 - 13:46:32
Mpanjifan’i blueline aho ary efa te-hiala fa nahita démo-n’ny tolotr’i telma/moov/eassy vaovao (démo tany amin’ny olona tsotra sy teny amin’i telma), saingy tsy havelany, nefa ny soratra anaty “contrat” diso fa modiany tsy fantatra …
nalefako FB, friendfeed sy twitter ary serasera daholo, eto ny rohy :
http://ff.im/sliAP sy eto http://fr.groups.yahoo.com/group/serasera/message/37201
Wednesday, October 20, 2010 - 14:18:37
falyfamalagasy : S be nareo zany fa tapaka *kely* (eson-teny) tapak’andro fotsiny dia efa euros marobe no manque à gagner. Raha ny fahitako azy aloha sahalahala amin’ny mitovitovy ihany ny toetra sy fomba fiasa, ary kalitaon’ny fai eto Madagasikara. Ny haratsian-doha koa aza. Efa tao amin’i Moov mantsy aho no niala.
Risque be ny hanao di-doha hiala, satria sady efa misy chèque de garantie mipetraka ihany koa any amin-dry zareo, moa manan-jo hisintona ao @ kaontinao hatrany izy. Raha hi-risque ianao dia azo atao ihany ny mandefa lettre de résiliation, hazavao ao hoe satria sady efa nahavita mihoatra ny 1 an ianao moa tsy mi-respecter ny contrat koa izy. Ao anatin’ilay taratasy izy asaina mampilaza ny fotoana mahamety hanateranao ny matériel. Atero tanana eny aminy, asio copie accusé de réception (sonia, fitomboka ary daty ataon’ilay sipa eo @ accueil), rito ny vola ao amin’ny kaontin’ny banky. Io farany io no zava-dehibe indrindra.
Mety hiitatra ho lasa manao chèque sans provision ianao amin’izay, mety hampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana ry zareo, nefa koa mety vovon’alika fotsiny koa ny azy fa tsy handany andro aminao izy rehefa hitany fa SAHY ianao.
Secret: Ny karazan’olona tsy tiako faharoa ankoatry ny FAI dia ny mpiasa sy mpandraharaha eo anivon’ny fitsarana, indrindra ny mpisolovava.
Wednesday, October 20, 2010 - 14:20:30
Ary ity ve aloha ho an’ny mpanjifa vaovao ihany sa ho an’ny daholobe?
“Grande promotion jusqu’à fin 2010 #Madagascar: la 4G de blueline est à 0Ar/mois, surfez à haut débit.”
Wednesday, October 20, 2010 - 17:17:38
Hataoko fa ho an’ny vaovao, fa izaho efa manomana fitarainana “plainte pour non respect des causes contractuelles”
Wednesday, October 20, 2010 - 17:35:38
tsy nisy chèque de garantie tany ka, ny chèque caution napetrako efa encaissé tamin’ny souscription, ny résiliation efa azony, efa accusé, fa saingy refusée. Ny fahatapahina dia non respect du contrat raha jerena ny art1 ny contrat de services widecom, ny olona dia abonné widecom lé antenne carré ambony tafo, tsy habilité hanala azy aho !
Raha afaka tsy maka mpisolo vava aho dia ezahiko hatao irery, efa maro ireo tezitra amin’i blueline mantsy, sao hafaka mivondrona !
Hivadika telma aho (tsy moov fa ny fitambaran’i telma/moov/eassy), nahita démo aho tany am telma, tena 1 méga ny débit, ary mbola nijery tany am particulier, 1 méga ihany koa ! Nefa ny vidiny ambany kokoa, i Widecom SME 256 kbps 264000 ar/mois ! Mahatsiravina, moa ny 4G nandramana ny 1 méga dia 62 kbps tamin’ny nanao test !!!!
Wednesday, October 20, 2010 - 18:59:33
diso be ny teny gasiko : “ny olana” fa tsy hoe “ny olona”
Tiako hazavaina koa : ny fahatapahin’ny connexion matetika dia tsy fanajana ny contrat izay milaza fa mi-fournir “connexion permanente”
Farany, azoko hatao ny mankany amin’ny banky milaza azy hoe hajanony ny prélèvement automatique halefa any amin’i Blueline … saingy ny matériel-ny (antenne+terminal IDU) dia mbola aty an-trano ary tsy mahay manala an’ireo aho.
Dia misaotra amin’ny toro hevitra rehetra e !
Thursday, October 21, 2010 - 10:02:36
62 kbps izany aloha bit sa byte? Ny ahy mantsy 4G amin’ilay 512Mo dia eo amin’ny 32ko eo, izany ohe any ho any amin’ny 256 k. Izay raha ny mentalité sy définition -n’ny atao hoe débit eto amin’ny tanàna, dia norme io amiko (azo ihafiana). Ny terme technique an-dry zalahy mantsy misy hoe débit tsotra sy débit garanti, ka rehefa amin’ilay tolotra tsy garanti dia ny famaritana azy dia hoe miovaova eo anelanelan’ny 0 hatramin’ilay max (oh 512 kbps).
Thursday, October 21, 2010 - 10:03:37
Thursday, October 21, 2010 - 10:55:58
kb (kilobits) fa tsy kB (kilobytes na ko) ka ! Raha kB kosa dia confortable be izany 62 izany satria équivalent de 62 kB x 8 = 496 kb (eto misy fanaovana test fiable : http://mire.gaoland.net)
Thursday, October 21, 2010 - 11:05:19
Odryyy, mamangy amin’ny fahoriana tompoko. Nareo kosa aza sao ao ambany tonelina no monina dia tsy mahazo tsara ilay 4G. Ety amin’ny faritra Mahazo (atsinanan’Ampasampito) no misy ahy, dia rehefa manao torrent aho dia mahita débit stable eo @ 32ko eo ilay 4G 512 io. Rehefa ho tsara izy, nisy fotoana aza upload maika no natao, mahita débit stable 12ko ihany koa.
Ka raha sanatria ny toerana misy anareo no lavitra na voasakantsakana, anontanio ihany koa ny Telma ny amin’ny teknolojia ampiasainy sy ny hoe mahazo any amin’ny faritra misy anao koa ve io tolotry ny telma io. Ndrao dia Jérome ihany no Randria.
Izaho mantsy tamin’ny nifindra trano farany teo saika hiverina Telma satria hoe tsy mbola mahazo 4G ny toerana onenako, dia namaly ny moov hoe tsy tody ADSL ihany koa hono ilay misy anay, izaho anefa nieritreritra hoe rehefa tongan’ny fil dia tongan’ny ADSL. Dia naleoko nanao engagement 4G dia manao SDF aty an-tanin’olona aloha mandra-pahatongan’ny couverture 4G eny amin’ny tanàna.
Thursday, October 21, 2010 - 11:40:48
tsara fa tafita izany ianareo ka … “Blueline always on” ny slogan !
Thursday, October 21, 2010 - 23:43:05
misy rss letia le izy aa
ny design no somary tsy tiako @ le orange…
sady ra vao tsy afaka manova css dia tsy miady @ piesiko eee
Thursday, October 21, 2010 - 23:43:52
i should subscribe to the rss :-)
Friday, October 22, 2010 - 10:09:04
simp> interesting io matoa tena featured eto. Tsy n’importe quel blog akory dia hahazo rohy sy GoogleJuice eto amiko eto. :P
William et Catherine. »
« Raha toa moa ka ... zavamaneno misy tadiny.